Eshibhile ngokwezifiso ishidi metal Welding izingxenye ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Inqubo yensimbi yensimbi ifaka insimbi. Imvamisa okusetshenziswa wukushisela kagesi nokushisela igesi, kanye ne-laser welding, i-brazing, i-welding ye-thermal, i-electron beam welding, i-welding eqhumayo, njll. Izingxenye zensimbi yeshidi ziyimikhiqizo ecutshungulwa ubuchwepheshe bensimbi.
Izingxenye zensimbi ezenziwe ngokwezifiso zensimbi zensimbi-ukucacisa izinsimbi zensimbi zensimbi zensimbi zokucubungula izingxenye zemishini
Sihlala yonke indawo. Izingxenye zensimbi zensimbi azihlukaniseki kusuka ezingxenyeni zensimbi ngokusebenzisa amandla e-filament power, ukusika kwe-laser, ukucubungula okusindayo, ukuhlanganiswa kwensimbi, ukudweba kwensimbi, ukusika kwe-plasma, ukushisela ngokunemba, ukwakha umqulu, ukugoba kwensimbi, ukugoqa, ukusika i-jet yamanzi, okwenziwe ngokunemba Welding. Ishidi lensimbi lichazwa ngokuthi: ishidi lensimbi inqubo ebanzi yokusebenza ebandayo yamashidi wensimbi (imvamisa engaphansi kwe-6mm), kufaka phakathi ukugunda, ukubhoboza / ukusika / ukuhlanganisa, ukusonga, ukushisela, ukuriveting, ukusika nokwakha (njengemizimba yemoto). Isici sayo esivelele ukushuba okufanayo kwengxenye efanayo. Imikhiqizo yensimbi yeshidi inezici zesisindo esincane, amandla aphakeme, ukuqhutshwa kukagesi, izindleko eziphansi, nokusebenza okuhle kokukhiqiza ngobuningi. Zinokusetshenziswa okuhlukahlukene. Ukusebenza kwensimbi yeshidi kusetshenziswe kabanzi emkhakheni we-elekthronikhi, ukuxhumana, imboni yezimoto, nemishini yezokwelapha. Isibonelo, ezimweni zamakhompiyutha, omakhalekhukhwini, ne-MP3, ishidi lensimbi liyingxenye ebaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lisetshenziselwa ukwenziwa kwemishini yezokwelapha, futhi lisetshenziswa nasemizimbeni yezimoto neloli (amaloli), izindiza zezindiza namaphiko, amatafula ezokwelapha, uphahla lokwakha (ukwakhiwa) nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi.
Izinzuzo Shanghai Ouzhan ishidi metal Welding ezishintshayo izingxenye
Kwenziwe ngentando zethusi ishidi lensimbi Welding izingxenye
Inqubo eyinhloko Ukucubungula izinsimbi zensimbi
Langaphambilini Izingxenye zensimbi zensimbi zokushisela
Olandelayo: Izingxenye ze-CNC zethusi